Faraxa Cali Shire Ma call box-ka [Aaran-Jaanbaa]?
Saturday September 15, 2018 - 00:52:07 in Wararka by
Faarax Cali Shire (Af-balaadh) oo ahaa Wasiirkii Maaliyada ee ugua awooda badnaa xukuumadii Dr Faroole ayaa dhawaan sheegay inuu rajo ka qabo inuu Kursiga sare ee PL maamulo Sanadka 2019- hadii Alle idmo.
Faarax Cali-shire Jaamac waxa uu ku soo barbaarey guri siyaasadeed, waxaa soo koriyey adeerkiis caan ahaa oo ka soo shaqeeyey dowladihii hore ee Soomaaliya waa Maxamuud Jaamac Afbalaar oo ahaa nin si weyn looga yaqaaney Soomaaliya, kana mid ahaa asaasayaashii Puntland, Afbalaar waxa uu kamid ahaa odoyaashii Maanifesto ee la xirey sanadkii 1990, sidoo kale wuxuu kamid ahaan jiray Goosankii Afsoomaalig
Dadka Faarax Cali Shire yaqaan ayaa ku tilmaamay nin xidhiidh fiican la leh kooxdii (Aaran-Jaan) oo Shan Sano Maalaysay Puntland C/raxmaan Faroole & Qoyskiisana aad ugu dhow- Reer Puntland markay Faarah Cali Shire arkaan waxaay Xasuusanayaa Xukuumadii Faroole & kooxdii ' Aaran-Jaan).
Hadii Faarax la doorto oo Alleba u qoro Xafiiska waxa iska cad- in Puntland noqonayso Meel uu Majaraha u hayo Maxamed Faroole oo horay loogu dhaliilay wax-yeelaynti & ku darki-faladii awoodaha Dastuuriga ah ee Puntland.
Qof magciisa qariyay ayaa oo aad u darsay siyaasada wuxuu leeyahay Musharaxnimada Faarax waxa ka danbeeyay oo kula-taliyay Kooxdii ay mudad badan Jaarka siyaasada ahaayeen ( ee Aaran-Jaan) oo doonaysa inay mar kale awooda dalka xukumaan oo helaan "Qandaraasyadii & lunsashadii Hantida umadda Reer Puntland.
2- Qodob uu isku Xalaalayn-karo Musharax Faara
.A- inuu meel fagaare ah ka sheego inaan "Aaran-jaan Sharaxin.
B- inuu Qeexo Siyaasadiisa si Balaadhan oo ku Qoton-ta waxa uu ka aaminsan-yahay (Siyaasada & awoodaha Qoyska lagu soo koobo.